YPS (Yangon Payment Service) ကဒ်စနစ်အတွက် စက် ၁,၄၀၀ ကျော်တပ်ဆင်ပြီး၊ စက်အလုံးရေ ၁,၃၀၀ ကျော်ကို စစ်ဆေးပြီးဖြစ်ကာ၊ နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့် ပြေးဆွဲနေသောယာဉ်များတွင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး Pilot Project အား မကြာခင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (YRTA) ထံမှသိရသည်။
“ယာဉ် ၁,၅၀၀ မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နဲ့ ယာဉ်တွေရဲ့ စက်ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ကျန်တဲ့ယာဉ်တွေကလွဲလို့ ယာဉ်အစီးရေ ၁,၄၈၀ ကျော်မှာ စက်တွေတပ်ဆင်ပြီးပါပြီ။ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ စက်တွေကို စစ်ဆေးရပါတယ်။ တပ်ဆင်ပြီးစက်တွေရဲ့ အလုပ်လုပ်မှုကို စစ်ဆေးရပါတယ်။ အခုဆိုရင် စက်တပ်ဆင်ပြီးတဲ့ ယာဉ်စီးရေ ၁,၃၁၃ စီးကို စစ်ဆေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်မပြေတဲ့စက်တွေကို ပြုပြင်မှုတွေလုပ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ သွားနေတဲ့ယာဉ်တွေမှာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေကို မကြာခင်မှာ ဆောင်ရွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကို Asia Starmar Transport Intelligent ကုမ္ပဏီနဲ့ ယာဉ်လိုင်းတွေ ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။”
ဟု YRTA တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးလှအောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် YRTA မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးအောင်ညီညီမော်ကလည်း
“စက်တွေတပ်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးနိုင်မှုတွေရှိနိုင်ကြောင်းကို စက်တပ်ဆင်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ ယာဉ်လိုင်းကုမ္ပဏီတွေက တင်ပြလာတာတွေရှိပါတယ်။ ဒီစက်တွေဟာ ငွေကြေးကောက်ခံမှုအတွက် အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သတိပြုရမယ့်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ နည်းပညာပိုင်းမှာလည်း စက်တွေကို တပ်ဆင်ပြီးတဲ့အခါ Payment System ကြီးပုံမှန်လည်ပတ်နေနိုင်အောင်၊ Software ပိုင်းမှာ အမှားအယွင်းတွေကင်းစင်အောင်အတွက်ဆိုပြီး စမ်းသပ်မှုတွေကို ‌မြောက်မြားစွာလုပ်ရပါတယ်။ အဲဒီစမ်းသပ်မှုတွေကတစ်ဆင့် ရလာတဲ့အချက်အလက်ပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အများပြည်သူအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အလောတကြီးဆောင်ရွက်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် Pilot Project တွေလုပ်မယ်။ ဒါပြီးရင်လည်း ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အမှားအယွင်းကင်းကင်းနဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ စမ်းသပ်မှုတွေကို အထပ်ထပ်အခါအခါဆောင်ရွက်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”
Yangon Payment Services (YPS) အတွက် E-Payment ဝန်ဆောင်မှု၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် နှင့် POS device များတပ်ဆင်ရန် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ကတ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှု စာချုပ် Service Level Agreement ကို Asia Starmar Transport Intelligent Co.,Ltd. နှင့် ယာဉ်လိုင်းကုမ္ပဏီ (၄) ခု ဖြစ်သော Ludu’s Partner Public Co.,Ltd. ၊ City Transit Co.,Ltd. ၊ GYCT Public Co.,Ltd. နှင့် YUPT Public Co.,Ltd. တို့ ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒုတိယအကြိမ်မြောက် 2020 Yangon International Motor Show အတွက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပပြုလုပ်